Accueil > Gazetin'ny nosy > Taxi brousse: Dia ahoana ny momba ireo efa manana tobim-piantsonana ?
Taxi brousse: Dia ahoana ny momba ireo efa manana tobim-piantsonana ?
Ao anatin’ny fandaminana ny famindrana ireo fiara mpitatitra avy eto andrenivohitr’Antananarivo miazo ny faritra sy mankany amin’ny faritany ny tompon’andraikitra eo anivon’ny ministeran’ny Fitaterana amin’izao fotoana. Efa vita tokoa mantsy ny tobim-piantsonan’ny fiara mpitatitra momba izany eny Andohatapenaka, ary amin’ny volana martsa io no tokony ho vita koa ny eny amin’ny “By Pass” miazo an’Ambohimanambola.
Raha ny akom-baovao aloha dia mbola niantona kely ny famindrana tokony natao teny Andohatapenaka. Ny alarobia teo no tokony ho efa tafafindra teny ireo tokony hitoby eny. Mbola misy fepetra takian’ireo vondron’asam-pitaterana (coopérative), hoy ny akom-baovao, ka eo ampandaminana ny momba izany ry zareo mpitatitra sy ny fanjakana amin’ny alalan’ny “Agence de transport terrestre na ny Att.
Fa ny zava-dehibe tokony hajaina koa aloha amin’ny sehatr’asa toy ny fitaterana dia ny foto-kevitry ny fahalalahana mandraharaha (liberté d’entreprendre). Ekena fa ny lalàna dia natao ho an’ny rehetra fa tsy nanavahana, saingy misy ihany ny fandaminana ateraka ny rafitra sasany tokony hajaina, araka ny foto-kevitra ny fahalalahana mandraharaha.
Raha ny momba ity tontolon’ny tobim-piantsonan’ny fiara mpitatitra mankany amin’ny faritra sy faritany ity no asian-dresaka dia eo tokoa aloha ny fanjakana, vokatra ny fifanarahana fiaraha-miombon’antoka amin’ny sehatra tsy miankina, izay nanao fotodrafitrasa hitobian’ireo fiara, toa io vao vita eny Andohatapenaka io, fa tsy azo lavina koa fa misy ny vondron’asam-pitaterana no nanangana tobim-piantsonana manokana ho azy.
Momba ity farany izany dia ny fenitra tsy maintsy hajaina no tokony soritan’ny fanjakana mba tsy hiteraka olana amin’ny tontolo manodidina, indrindra fa ny fifamoivoizana sy ny lalambe ho an’ny rehetra. Rehefa voahaja izany fepetra nosoritan’ny fanjakana izany dia tokony omena alalana hampiasa ankalalahana ny toerana efa nohajariany ilay vondron’asam-pitaterana. Ohatra avy hatrany no faritana. Manana ny toerana manokana efa nohajariany ho azy ny vondron’asam-pitaterana “Vatsy” sy “Cotisse” eny Ambodivona. Manana ny toerana manokana ho azy koa eny Andranobevava Amboditsiry eny ny miazo ny Faritra Sava. Raha misy ny tsinin’ireo tobin’izy ireo, dia ny fanjakana no manatona azy ireo ka mametraka fepetra hanarenana izany, fa tsy hoe terena tsy maintsy mandeha eny Andohatapenaka na eny Ambohimanambola izy ireo.
Ireo vondron’asam-pitaterana tsy nanana toerana manokana fa mibahana ny arabe sy ny sisin-dalana no tsy maintsy miala eny ka manatona an’ireo toby vao vita ireo. Toraka izany koa ny eny amin’ny fasan’ny Karana izay tany manan-tompo io misy ny tobim-piantsonana io fa findramana karazan’ny vonjy maika ihany no nahatonga an’ireo mpitatitra ho nitoby teny.
Sady tafiditra ao anatin’ny fanajana ny foto-kevitra ny fifaninanana malalaka (libre concurrence) koa izany, ary mba afaka manana safidy amin’izay vondron’asam-pitaterana tiany handehanana ny mpanjifa.
Raha samy manana tobim-piantsonana ho azy avy ange ny vondron’asam-pitaterana isan-tokony fa tsy eny amin’ny sisin-dalana na amin’ny toerana manan-tompo, ka afaka andraikitra ny fanjakana amin’ny tsy maintsy iheverana fotodrafitrasa ho toeram-piantsonan’ny fiara mpanao fitaterana e! Eny na ny sehatra tsy miankina toy ny Jovenna izay nanao fifanarahana tamin’ny fanjakana aza no nanangana azy na hitantana azy koa.
Raha ny fahitana ny fihetsika ny fitondram-panjakana amin’izao fotoana anefa dia tiany ho eo ambany vahohony hatrany ny tontolon’ny seha-pihariana eto ka ny fitaterana no iray amin’izany, izay mamotika ny finiavan’ny mpanam-bola hisehatra amin’izany tontolo ara-toekarena izany.